Xayawaanka tundra: sifooyinka, muuqaalka iyo cimilada | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 07/04/2022 12:00 | Deegaanka
Dunideena waxa jira habab deegaan oo kala duwan oo leh astaamo u gaar ah oo ka dhigaya daaqa iyo duurka ka dhex abuurma. Mid ka mid ah nidaamyada deegaanka ee aan baran doonno waa tundra. The tundra fauna Waxaa lagu soo saaray deegaan xoogaa dhib badan. Si kastaba ha ahaatee, noocyada ayaa awood u leh inay la qabsadaan deegaanka si ay u noolaadaan una horumariyaan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa sifooyinka ay leeyihiin xayawaanka tundra, sida ay u badbaadaan iyo qaabka ay u nool yihiin.
1 deegaanka tundra
2 duurjoogta tundra
3 Noocyada tundra
3.1 tundra arctic
3.3 tundra antarctic
Waxaan ku qeexi karnaa tundra inay tahay biomes-ka noole oo ka maqan dhir sababo la xiriira cimiladooda, maadaama ay yihiin meelo ka baxsan gobollada cirifka ee dhulka. Tani waa meel ay dhirtu ku dhowdahay inaysan jirin ilaa iyo hadda waxa ay dhaafsiisan tahay dhulka ay dhirtu ka baxdo.
Si kastaba ha ahaatee, qabowga iyo cimilada qoyan awgeed, dhulku wuxuu daboolay caws iyo lichen, xitaa geedaha safsaafka ah ee arctic ayaa ka baxay meelaha qaarkood. Tani waa mahad xagaageeda, inkastoo ay gaaban yihiin (wax aan ka badnayn laba bilood), aad ayey uga qabow yihiin jiilaalka, inkastoo ay dhif tahay inay dhaafaan 10 darajo.
Waxaa soo baxday in uusan roob badan ka helin halkan, sidaa darteed dhirta yar ee ka baxda waxay taageeri karaan nolosha oo ay sidaas u noqdaan cunto loogu talagalay xayawaanka tundra. Badanaa waa sagxad siman oo hoosta barafku ku yaal, kuwaas oo noqon kara inta u dhaxaysa 30 cm iyo 1 mitir. Haddaba, Biyaha meelahaas ku yaal ma daadi karaan, way fadhiistaan, oo samaystaan ​​lago iyo dhiiqo Waxay bixiyaan qoyaanka lagama maarmaanka u ah badbaadada dhirta.
Dhalashada sii socota waxay abuurtaa dildilaaca joomatari ee dhulka, iyo meesha barafku aanu baabi'in, qanjidhada iyo tuulmooyinka ayaa laga arki karaa dusha sare. Sidoo kale way fududahay in la helo muuqaalo dhagax ah oo lichen-ku daboolan, kuwaas oo u oggolaanaya noocyo kala duwan oo xayawaan ah inay yeeshaan degaan yar oo iyaga u gaar ah.
Cimilada la yaabka leh ee tundra awgeed, xayawaanku waa in loo diyaar garoobaa sidii ay kulaylka u adkeysan lahaayeen, sidaas darteed waa suurtagal in la helo noocyo aan meel kale ku arag. Kuwaas waxaa ka mid ah:
deerada: had iyo jeer waxay aadaan tundra marka xagaaga yimaado sababtoo ah meel kale uma adkeysan karaan kulaylka. Tundra waxay siisaa cimilo ilaa 10 darajo ah.
Miski dibi. Marka laga soo tago magaca "Musk", waxay leedahay ur xooggan oo soo jiidasho leh haweenka. Waxay ku daboolan yihiin timo shukulaatada-brown ah oo u adkeysan kara heerkulka hooseeya waxayna koraan ilaa 60 cm dherer.
Bakayle Arctic ah. Bakaylahan cad ee dhegaha dhaadheer ku leh dhibco madaw ayaa u muuqda bakayle, laakiin maya, waa mid ka mid ah bakaylaha ugu waaweyn adduunka. Waxay leedahay maqaar qaro weyn oo ay ku daboolan yihiin timo dhumuc iyo jilicsanaan leh oo ka ilaaliya heerkulka hooseeya.
orgiga barafka: Waa nooc caan ah oo riyaha ah oo laga heli karo xayawaanka tundra, maadaama timaheeda iyo xooggeeda jireed ay ka dhigayaan mid ku habboon in lagu noolaado cimilada noolahaan.
Lemmings: waa jiir yaryar oo dhogor badan, oo xiiso darteed, waxaan kuu sheegi doonnaa, caan ku ah is-dilitaanka, waxay u sameeyaan si wadajir ah iyagoo isku tuuraya badda.
Xayawaankan ka sokow, noocyada kale ee caadiga ah sida orso, yeyda, gorgorrada, guumaysta ayaa laga heli karaa fauna tundra; biyaha, kalluunka sida salmon. Marka laga soo tago xayawaanka tundra, waxaa jira dhir badan, oo ka kooban caws iyo geedo yaryar, taas oo ay ugu wacan tahay qoyaanka uu abuuray barafka dhulka hoose.
Waxaan ku dhejin karnaa cirifka woqooyi ee hoos yimaada koofiyadda barafka Arctic, oo ka fidsan dhul aan la aqbali karin ilaa cidhifka taiga-qeexay taiga. Khariidadda, waxay noqon doontaa kala badh Kanada iyo qayb weyn oo Alaska ah.
Inta badan, waan heli karnaa lakabka ciidda hoostiisa barafsan, oo caadi ahaan loo yaqaan permafrost, kaas oo ka kooban inta badan walxo fican. Marka ay biyuhu buuxiyaan dusha sare, waxaa samaysma boogaha peat iyo balliyada, kuwaas oo siinaya biyaha dhirta.
Dhirta Arctic tundra ma laha nidaam xidid qoto dheer, laakiin weli waxaa jira noocyo kala duwan oo dhir ah oo u adkeysan kara cimilada qabow: geedo yaryar, mosses, sedges, earthworms, iyo cawska... iwm
Xayawaanku waxa loo habeeyey in ay u adkaystaan ​​jiilaalka dheer, qabow oo ay tarmaan oo si degdeg ah u tarmaan xagaaga. Xayawaanka sida naasleyda iyo shimbiraha sidoo kale waxay leeyihiin dahaar dheeraad ah oo dufan ah. Xayawaan badan ayaa xilliga jiilaalka ku hurda cunto la'aan awgeed. Doorasho kale ayaa ah inaad u haajirto koonfurta jiilaalka, sida shimbiruhu sameeyaan.
Heerkul aad u qabow awgeed xamaaratada iyo amfibiyadu way yar yihiin ama ma jiraan. Dadku waxay ku jiraan gariir joogto ah oo ay ugu wacan tahay socdaalka iyo socdaalka joogtada ah.
Waxay ku taallaa dhul buuraley ah meel kasta oo meeraha ka mid ah, joog ahaanna ka sarreeya heerka badda, mana jirto geed ka baxa gebi ahaanba. Muddada koritaanka waa qiyaastii 180 maalmood. Heerkulka habeenkii ayaa inta badan ka hooseeya baraf. Si ka duwan tundra arctic, ciidda ku taal Alps si fiican ayaa loo miiray.
Dhirtani waxay aad ugu eg yihiin kuwa laga helo Arctic iyo waxaa ka mid ah dhirta dhirta sida cawska, geedaha yaryar ee caleenta leh iyo kulaylka, geedo yaryar. Xayawaanka ku nool tundra alpine sidoo kale si fiican ayaa loo habeeyey: naasleyda sida marmots, riyaha, idaha, shimbiraha dhogorta adag leh, iyo cayayaanka sida kuwa lamid ah, koronto, dhicin, iyo kuwo kale.
Waa mid ka mid ah nidaamyada deegaanka tundra ee aan caadiga ahayn. Waxaan ku arki karnaa Koonfurta Georgia iyo Koonfurta Sandwich Islands, kuwaas oo qayb ka ah Territory British ah, iyo sidoo kale qaar ka mid ah jasiiradaha Kergallen.
Dhererkeeda iyo u dhawaanshaha ay tirarka u dhow awgeed. Cimilada tundra waxay ahaan doontaa meel qabow inta badan sanadka, qiyaastii 6 ilaa 10 bilood. Aynu xasuusanno curiyayaasha aan noolayn, sida ciidda ama dhulka, buuraha, biyaha, jawiga, iwm. Waxaa loo yaqaan biome-ga oo xiiso leh in la barto.
Guud ahaan, jiilaalka tundra waa mid dheer, madow, aad u qabow oo qalalan, gaarey ilaa -70 darajo Celsius meelaha qaarkood. Inkasta oo dusha sare uu baraf da'o sanadka intiisa badan, roobab iftiin leh ayaa u yimaada qaabka baraf inta lagu jiro xagaaga, marka heerkulku hoos u dhaco.
Gobollada darafyada, celceliska heerkulka waa -12 ilaa -6 degrees centigrade. Xilliga jiilaalka waxay gaari karaan 34 digrii sentimitir, halka xagaaga ay badanaa gaaraan -3ºC. Haddii aan ka hadalno dhulka sare ama buuraha, xagaaga waxay gaari karaan 10 darajo Celsius, laakiin habeenkii waxay noqon doontaa dhowr darajo oo eber ka hooseeya si ay naftooda u ilaaliyaan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto xayawaanka tundra iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » duurjoogta tundra
Agabka wax qabad iyo dahaarka